Semalt: अद्भुत ईमेल मार्केटिंग अभियानहरूका लागि सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गर्दै
ईमेल मार्केटिंग एक शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरण भएको छ जुन विश्वव्यापी रूपमा लाखौं वेबसाइट विकासकर्ताहरूमा पुगेको छ। उद्यमहरूले साधारण ईमेल मार्केटिंग टेकनीकको माध्यमबाट टनको बिक्री गरेका छन्। यो विधि बिस्तारै अन्य शक्तिशाली एसईओ रणनीतिहरु लाई बिस्तार गर्दै छ जस्तो कि सामग्री मार्केटि।। परिणाम स्वरूप, केहि ई-वाणिज्य साइटहरू चलाउँदै मानिसहरू अझै यो विधि प्रयोग गर्दैनन्।
यद्यपि मार्केटिंग च्यानल जस्ता सामाजिक मीडियाले मार्केटिंगको यस विधिलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, सामाजिक मिडिया ईमेल मार्केटिंग को पूर्ण नेतृत्व उत्पादन को पुनर्स्थापना गर्न सक्दछ। ईमेल मार्केटिंगको साथ सोशल मिडिया प्रयोग गर्नु सार्थक विचार हुन सक्छ, विशेष गरी सबै पक्षहरूको लागि त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको वातावरण छ भन्ने सुनिश्चित गर्नमा।
एसएमएम अभियानमा सामाजिक नेटवर्कहरू समावेश गर्नाले तपाईंको व्यवसायलाई यसको विस्तार बढाउन, ग्राहकहरूको संख्या बढाउँदै सामाजिक मिडिया विस्तार गर्न र तपाईंले मार्केटिंग गरिरहनुभएको ब्रान्डमा कुञ्जी प्रभावकारीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
यस लेखमा, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, फ्रान्क Abagnale, कसरी सामाजिक मिडिया र ईमेल मार्केटि campaigns अभियानहरू हातले जान सक्दछन् भनेर केही विधिहरू प्रस्तुत गर्दछ:
१. तपाईंको वेब डिजाइनमा सामाजिक प्रतीकहरू समावेश गर्नुहोस्।
सामाजिक आइकनहरूको साथसाथै CTA आइकनहरू उत्कृष्ट विचार हुन सक्छ। यसका साथै व्यक्तिले पोष्ट र सामग्रीमा एसईओ कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्न सक्दछ। यो दृष्टिकोण खोजी ईन्जिनहरूमा वेबसाइटको श्रेणीको लागि आवश्यक छ।
२. न्यूजलेटर्स साझा गर्नुहोस्
सामाजिक मिडिया साइटहरूमा सामाजिक "सेयर" बटनहरू सामाजिक मिडियाको सब भन्दा अविश्वसनीय सुविधाहरू हुन्। न्यूजलेटरहरू दिने र साझेदारी साझेदारी सामग्री प्रासंगिकता निर्धारणको एक विधि हो। गुगलले SERPs मा साइट उच्च राखेर यो सेयरि। गर्दछ। केही अध्ययनहरूमा, शेयर बटनहरूले उच्च CTR लाई प्रोत्साहित गर्छन्। उच्च सीटीआर ट्विटर, फेसबुक, र लिंक्डइन जस्ता सामाजिक नेटवर्कबाट आउँदछ।
Live. प्रत्यक्ष सामाजिक फिडहरूको लागि कोड प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रत्यक्ष फिडहरू प्रयोग गर्नु भनेको मार्केटिंगको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिले, प्रत्यक्ष फिडले प्रयोगकर्तामा देखा पर्ने ताजा फिल्टर गरिएको सामग्री स्ट्रिम गर्न सक्दछ जुन उनीहरूले तपाईंको वेब सामग्री प्रयोग गर्छन्। यस प्रक्रियामा वेबसाइटलाई प्रोग्राम गर्नको लागि योग्य कोडर राख्नु समावेश हुन सक्छ।
A. एउटा प्रतियोगिता राख्नुहोस्।
खेलहरूले तपाइँको सामग्री, उत्पादन वा तपाइँको श्रोतालाई संलग्न गराउन प्रचार गर्दछ। तपाइँ आफ्नो प्रतिस्पर्धा मा भाग लिन मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न एक पदोन्नति वा एक freebie दिन सक्नुहुन्छ। सामेल हुन, व्यक्तिलाई सामाजिक च्यानलमा खेल्न लगाउनुहोस् जस्तै फेसबुक वा खेलको सट्टामा ईमेलको लागि अप्ट इन गर्नुहोस्। यो विधिले तपाईंको एसईओलाई मद्दत गर्दछ साथै तपाईंको मार्केटिंग अभियानहरूका लागि ईमेल सूची संकलन गर्न।
कुनै पनि अनलाइन व्यापारको लागि, तपाइँको ग्राहकहरूसँग स्थिर संवाद प्राप्त गर्न आवश्यक छ। कम्पनीहरूले यस सन्दर्भमा सफल ईमेल मार्केटि campaigns अभियानको स्थापनाको माध्यमबाट सफल भएका छन्। यद्यपि यो विधि बिस्तारै प्रयोगबाट बाहिर जाँदै छ अन्य शक्तिशाली विधिहरूको उपलब्धताका कारण। सामाजिक नेटवर्क तपाईको ईमेल मार्केटि campaign अभियानको सफलता पक्रिराख्ने चीज हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, सोशल मिडियाले प्रशंसापत्र, साझेदारीको साथ साथ सदस्यता को रूपमा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रदर्शन गर्न केहि कल-टु-एक्शन बटन जस्ता पक्षहरू समावेश गर्न सक्दछ।